Ambition: Gamification hitantanana, hanentanana ary hampitombo ny fahombiazan'ny ekipa mpivarotra anao | Martech Zone
Ilaina amin'ny fampiroboroboana ny varotra. Miaraka amin'ny ekipa mpivarotra mirotsaka an-tsehatra dia mahatsapa ho mavitrika kokoa izy ireo ary mifandray amin'ny tanjon'ny fikambanana sy ny tanjony. Ny voka-dratsy ateraky ny mpiasa misintaka amin'ny fikambanana dia mety ho be - toy ny tsy fahombiazan'ny vokatra, ary ny talenta sy ny loharano very.
Raha ny momba ny ekipa varotra manokana, ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra dia mety handany ny fidiram-bola mivantana amin'ny orinasa. Ny orinasa dia tsy maintsy mitady fomba hampandraisana anjara mavitrika ny ekipa mpivarotra, na ahiana hanangana ekipa tsy mahomby amin'ny vokatra kely sy ny tahan'ny fifanakalozana avo lenta.
Sehatra fitantanana fivarotana ambition
Manambony Tena dia sehatra fitantanana varotra izay mampifandray ny departemanta sy ny loharanom-pahalalana ary ny metrikan'ny fampisehoana ho lasa rafitra mora iray. Ny ambition dia manome mazava sy mampiseho analytics amin'ny fotoana tena izy ho an'ireo orinasam-pivarotana iray manontolo.
Amin'ny fampiasana interface tsotra drag-and-drop, na dia ny mpitarika varotra tsy teknika aza dia afaka mamorona scorecard manokana, fifaninanana, tatitra ary maro hafa. Ireto misy fomba vitsivitsy hafa ampiasain'ny mpitarika ny varotra ny Ambition ao amin'ny fantsom-pahaizany.
Raiso i Peloton ary avadiho ho lozisialy ho an'ny ekipa mpivarotra ianao ary manana ambition –– coaching mandrisika miaraka amina leaderboard misy gamified. Miaraka amin'i Peloton, ny mpitaingina dia afaka mahita ny toerana misy azy mandritra ny diany mandritra ny fampitomboana ny vokatra. Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko gamification an'ny Ambition, ny mpitarika varotra dia afaka mamorona traikefa mitovy amin'ny fifaninanana nofinofy, fahitalavitra am-barotra, tabilao ary SPIFF hanampy amin'ny fanovana fiovana misy dikany ao amin'ny fikambanana.
Efa hatramin'ny am-polony taona maro ny Gamification, tamin'ny endrika iray na hafa. Ny ekipa mpivarotra dia nahita sanda amin'ny famoronana famporisihana sy famporisihana ny fifaninanana hamorona fifandonana ambony sy antony manentana eo amin'ny repoblika. Iza tokoa moa no tsy tia fifaninanana kely?
Namporisihan'ny fiovana haingana amin'ny asa lavitra, ny gamification dia niova avy amin'ny "mahafinaritra-to-manana" ho "mila-to-manana". Ny fandraisana andraikitra eo amin'ireo ekipa dia nanjary zava-dehibe kokoa satria ny ekipa mpivarotra dia tsy eo amin'ny sehatry ny varotra intsony. Ny gamification dia afaka manome ny mpitarika varotra fahitana amin'ny fomba fiasan'ny repoblika rehefa miasa ao an-trano ary mamela azy ireo handrisika ny fifaninanana salama.
Rindrambaiko Coaching momba ny varotra
Ny varotra varotra no mpanelanelana amin'ny fiatraikany mahomby indrindra amin'ny fampitomboana ny zava-bitan'ny rep mpivarotra ary, vokatr'izany, dia misy fiatraikany tsara amin'ny ekipa mpivarotra iray manontolo. Na inona na inona indostria, ny famindram-pahefana dia olana malaza eo amin'ny varotra, ary ny fahafaha-manao fampandrosoana matihanina dia mety hiteraka antony manosika ny mpiasa hijanona.
Miaraka amin'ny ekipa intsony amin'ny tany, Ireo mpitarika varotra dia tsy manana fahaizana mijanona eo amin'ny latabatry ny repoblika iray ary manontany hoe manao ahoana izy ireo, jereo hoe aiza no ilana fanampiana na mamaly fanontaniana maharitra. Na izany aza, amin'ny Ambition, ny coaching varotra dia manamora ny fitantanan'ireo mpitantana ny varotra satria manohy manamboatra ny toetrany lavitra izy ireo. Ho an'ny orinasa lehibe sy kely, ny mpitarika ny varotra dia afaka manangana fivoriana miverimberina, mirakitra resaka ary mitahiry drafitra hetsika rehetra ao amin'ny toerana iray. Ny programa malefaka sy matanjaka dia mamela ny mpitondra hamolavola ny programa misy azy ary hamerenana ny fivoriana miverimberina, ka rehefa manelingelina ny fiainana dia efa napetraka ny fivoriana.
Fivarotana fahiratan-tsaina sy fitantanana fahombiazana
Ny ekipa fivarotana no motera mitondra herinaratra amin'ny orinasa tsirairay. Ny dingan'ny fitantanana fahombiazan'ny varotra orinasa dia tokony hifantoka amin'ny fitazonana ity maotera ity ho tsara fanompoana, ny fiofanana momba ny fahaiza-manao ilain'izy ireo hahatratrarana tanjona kendrena sy hanaraha-maso ny fandrosoany rehefa mandroso izy ireo.
Miaraka amin'ny angon-drakitra CRM mampatanjaka ny isa famokarana vokatra sy ny fifaninanana, ny mpivarotra dia afaka mahazo antoka fa ny solo-dry zareo dia mitroka ny hetsika, ny tanjony ary ny naoty momba ny mpanjifa ankehitriny sy mety. Ireo mpitarika ny varotra koa dia manana fahitana amin'ny antso na mailaky ny repoblika, ary ny fivoriana voalahatra na vita, ary jereo ny repoblika amin'ny quadrantan'ny famokarana hahitana hoe iza no mamadika ny hetsika ho tanjona sy valiny.
Ho an'ireo mpitantana varotra mitady hahazo fahitana amin'ny zava-bitan'ny solo-draharaha isan-andro, ny sehatry ny Ambition dia manome scorecard isa izay ahitana lasibatra isan'andro. Ireo mpitarika ny varotra dia afaka mahita raha mijanona mandritra ny andro ny repona iray nefa tsy nahavita hetsika 100% ary mamela azy ireo handamina fotoana fohy ho an'ny coaching mba hanampiana ireo solo-dalàna hiverina amin'ny lala-mahitsy. Na dia tsy misy aza marina fomba iray hanaraha-maso ny fomba fiasan'ny repoblika, ny fampiasana rafitra fitantanana fahombiazan'ny varotra, toy ny Ambition, dia afaka miantoka ny fidirana amin'ny angon-drakitra azo antoka ary mamela ny maso ny mpivarotra sy ny mpitarika varotra manitsy ny làlan-kalehany.
Over 3,000 mpitantana varotra leverage Ambition hanampy anao handroaka antso bebe kokoa, handamina fivoriana bebe kokoa, ary hankalaza ny fifanarahana mihidy kokoa ho an'ireo ekipa mpivarotra lavitra na birao. Satria maro ny mpitarika ny varotra no mitady hampihena ny isan'ireo sehatra ampiasainy, ny Ambition no manao azy rehetra. Manomboka amin'ny coaching varotra ka hatrany amin'ny leaderboards, ny Ambition dia manampy ny mpitarika ny varotra handray fanapahan-kevitra manan-tsaina sy stratejika kokoa hahafahan'ny ekipa manatanteraka fampisehoana tantana tsara kokoa ilaina hamoahana valiny.
Ny ambition dia mifangaro amin'ny Salesforce, Slack, Dialsource, Cisco, ringDNA, Velocity, Gong, SalesLoft, Chorus, ary Outreach… Ho avy tsy ho ela ny Microsoft Teams. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Ambition sy ny fomba fitantanananao ny solo-varotrao:
Manomàna Demo Demo anio
Tags: fanirianaCiscoCRMDialsourcefananana orinasaGongMicrosoft TeamsfanentananaringDNAvarotra gamificationfivarotana fahitanafitantanana varotrametatra fivarotanaantony manosika ny varotrafahombiazan'ny varotrafitantanana fahombiazan'ny varotrafamokarana varotratatitra momba ny varotrascorecard fivarotanaekipa mpivarotrasalesforceSalesLofthiahotrahoranareohafainganam-pandeha
Brian Trautschold no mpiara-manorina ary COO ao Manambony Tena, ny sehatry ny fitantanana fampisehoana ankasitrahana namboarina namboarina ho an'ny orinasam-pivarotana an-tsokosoko sy an-taonany maro. Mifandraisa amin'i Brian ao amin'ny Twitter sy LinkedIn ary atombohy ny resaka momba ny lohahevitra tiany sasany: Sales, startup, marketing, ary tsaho momba ny varotra NBA.